Ciidamada amniga oo Afgooye ku qabtay rag ka ganacsada caruurta | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Ciidamada amniga oo Afgooye ku qabtay rag ka ganacsada caruurta
Ciidamada amniga oo Afgooye ku qabtay rag ka ganacsada caruurta
Ciidanka Booliiska maamulka degmada Afgooye ee Gobolka Shabeellaha Hoose ayaa Maanta gacanta ku dhigay rag lagu eedeeyay inay ka ganacsadaan Caruurta yar yar.
Wararka ayaa sheegaya in Raggaas oo labo ah la qabtay xili ay ku sugnaayeen goob laga raaco gaadiika oo ku taalla Afgooye, iyagoo doonayay sida dad goobjoogayaal ah ay sheegeen in Gaari PL ah soo saaran Gabar yar oo maalmihii lasoo dhaafay la boodi-goobayay.
Sidoo kale Saraakiil ka tirsan maamulka degmada Afgooye ayaa sheegay in raggaan ay qirteen inay ka tirsan yihiin habakad ka shaqeysa arrimaha ka ganacsiga Caruurta iyo qalaafiladda Caruurta, waxaana haatan lagu xiray Saldhig Boolis.
Raggan ayaa sheegay in muddo ay ku shaqeyn jireen sidii ay uga ganacsan lahaayeen Gabadhaha yar, iyagoona tilmaamay in soo qabasha gabadha haatan lagu qabtay ay ku qaateen lacag dhan 500 Dollar.
Muddooyinkii ugu dambeeyay gudaha dalka Soomaaliya ayaa waxaa la sheegay inay aad ugu soo badanayeen dad ka ganacsada Caruurta yar-yar iyo qalaafiladda, isla markaana waxaa baraha Bulshada lagu faafinayay sawirro Caruur maqan oo la la’yahay.
Maqaal horeKenya oo maxkamadayneyso rag loo heysto weerarkii Westgate Mall
Maqaal XigaRooble oo kormeeray safaaradda Soomaaliya ee Kuwait +Sawirro